Uzoyithanda Le mibono Yesipho Sama-Anime Okufanele Uyicabangele - Okunye
Uzoyithanda Le mibono Yesipho Sama-Anime Okufanele Uyicabangele YAKHE
Bangu inala wezipho ze-anime okufanele uzicabangele ngosuku lokuzalwa 'kwakhe'.
Noma ngabe lokho:
Kuyinto efanele ukucatshangelwa ngakunye, yize kukhona umehluko.
Nayi inqwaba yemibono okufanele uyihlole futhi uyikhumbule. & # x1f60e;
IMecha Company izothola ikhomishini njengenhlangano ephethwe.
Imibono Engaba Khona Yesipho Kubalandeli Bama-Anime Abesifazane:
1. Izikhwama ze-Anime
I-Shakugan no Shana Messenger Bag Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. I-Asuna I-Flash of Light Sword Art Online Messenger Bag Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Akubona kuphela abafana abakwazisayo izesekeli ze-anime nezikhwama, abesifazane yenza futhi uma ukuthole kahle.
Njenge-Sailor Moon messenger bag ngenhla. Ungathola okuthile okulula ngaphandle kokuthi kube ngaphezulu (ngaphandle uma lokho kudingekile).
Futhi kuyindlela ecashile yokubukisa ngombukiso we-anime owuthandayo ngenxa yomklamo wawo olula.
2. Izesekeli ze-Anime
I-Nezuko Demon Slayer Keychain Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. UFelicia Mitsuki Kitty Magia Record Keychain Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Kunjalo - umgexo / umaki wenja olula no-Usagi ngaphambili (Sailor Moon). Noma isongo.
Yinto ongahamba nayo yonke indawo, futhi ayinzima nakancane.
Lesi isethi encane kuphela yezinsiza ezingaba khona, kepha lokhu kufanele kukunikeze umbono omuhle wokuthi ucabangani.
ucezu lwempilo i-anime english dub
Okuhlobene: Ama-Quotes we-23 Classic Sailor Moon Azokunikeza Ukuqhuma Kusuka Esikhathini Esidlule
3. Plush Amathoyizi
I-Lucy Fairy Tail Plush Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. Midoriya Ukuhlala Pose My Hero Academia Plush Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Ama-Plushies eza ngazo zonke izinhlobo nobukhulu obuhlukile. Ithathwe ngokujwayelekile kusuka ku-anime ka 'Kawaii' efana ne-Pokemon (noma i-One Piece Yugioh, njll.).
Amathoyizi amaPlush angakhetha kalula ngoba:
Kulula ukuthumela (azikho izinkinga zokulimala).
Kunconyiwe: I-67 Yemibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime Yesikhathi Sonke (Alikho i-oda Lesikhundla)
4. Izigqoko ze-Anime zazo zonke izinhlobo
I-Chibi Characters Iphethini Elimnyama Butler Cap Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. Izaya noShizuo Durarara !! I-Cap Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Kwesinye isikhathi ufuna ukukhahlela emuva, uphole futhi ujabule. Futhi ayikho indlela engcono yokuveza lokho ngezingubo zakho.
Ngakho unalokho engqondweni, izigqoko ze-anime ezinjengalezi ayisipho esihle salolo hlobo lwesikhathi.
Okuhlobene: 7 Kwama-Anime Ahlonishwa Kakhulu Ama-Anime Aveza Imikhiqizo Ephakeme
5. Izithombe zama-Anime namaNendoroid‘s
Umdwebo Wentombi Enhle Wenkampani Rem Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. Inkampani enhle ye-Smile POP UP Parade Izuku Midoriya Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Uhlobo lwe-anime olucabangayo ngaye luyehlela kuye ini uhlobo lwe-anime angena kulo. Futhi yiziphi izinhlobo zabalingiswa.
Ngezibalo ze-anime namaNendoroid‘s kulula ukulahleka emgodini wonogwaja, ngoba kukhona ukukhetha okuningi ukwenza.
Ngakho-ke cabanga ngalokhu. I-Nendoroid‘s ikakhulukazi iyisinqumo esihle kubalandeli be-anime.
Okuhlobene: Amanani we-17 + Asemthethweni we-Nendoroid Woku-oda ngaphambili (Kukhishwe Ngo-2021)
iyini i-anime enkulu kunazo zonke
6. Izibalo ze-mini mini
I-Sailor Mars Sailor Moon Figuarts Mini Figure Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. I-Sailor Moon Sailor Moon Figuarts Mini Umfanekiso Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Izibalo ezincane zifanelwe isigaba esazo. Ngokungafani nezibalo eziningi ze-anime (ngisho namaNendoroid‘s) mancane. Njengoba incane njengama-intshi ama-3.
Kwesinye isikhathi kuncane, kwesinye isikhathi kukhulu kancane.
Futhi kulula ukuzinakekela njengoba zingabuthakathaka njengamanani “aphezulu kakhulu” athengiswayo.
Uma udinga imibono yesipho se-anime ngaphandle kwezibalo zeNendoroid, lokhu kungenye indlela enhle.
7. Izincwadi zokubhala zama-Anime
I-Anime Warning Notebook ezenzakalelayo Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. Incwadi YaseTokyo Ghoul-Kaneki Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Izincwadi zokubhalela zikhona jikelele ngakho-ke kukhona njalo into ongayithola ngaphandle kobulili noma okuthandwa nguwe.
Futhi ngokungafani nokunye okuthengiswayo kwe-anime, le yinto yomuntu siqu esetshenziselwa ukuqopha imicabango yakho. Ngakho-ke 'into yokwazisa' izosiza kakhulu ngalokhu. Ikakhulukazi njengoba kuyisipho esenzelwe abalandeli be-anime.
Imibono Engcono Kakhulu Yezipho ze-Anime Okufanele Uyicabangele YAKHE
22 Kwemibono Epholile Kunayo Yonke Yokukhombisa Ukuqoqwa Kwakho Kwezithombe ze-Anime
I-18 + BAKHULU ELIKHULU Abalandeli be-Grappler Quotes Bayothanda
Ukuvuselelwa Kokuncintisana KweNkampani kaCrunchyroll + Mecha (The Rising Of The Shield Hero)
38 Of The Greatest D. Gray Man Quotes Kusuka Kubalingiswa Abakhulu
Imboni ye-Anime Manje Isibiza u- $ 19.9 Billion Dollars (2019)
Inkemba Art Online + Demon Slayer Wins Newtype Anime Awards 2019
Izilinganiso Ezimangalisa Kakhulu ZikaRuiko Saten Ezivela Kusitimela Esithile Sesayensi
24+ Of The Greatest Kakashi Hatake Quotes for Naruto Fans
7 Mirajane Strauss Quotes Abalandeli Bomsila Bazothanda
Izilinganiso ezingama-40 + zeBlue Exorcist Ezizodala Imizwa Yakho
Uma Ufuna Okuthile Okuhlukile, Lezi Zingcaphuno Zika 'Karneval' Wll Do The Trick
yiziphi ama-animes amahle kunayo yonke isikhathi
i-anime ehamba phambili kunazo zonke
ama-animes lapho i-dub ingcono khona